Malezia: Sarotra fafàna ny fanalàna baraka ny fiandriànana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2010 8:48 GMT
Ilay Maleziana mpitoraka blaogy, Khairul Nizam Abd Ghani, na “Aduka Taruna”, dia nosamborina tsy ela akory izao noho izy notondroina ho nanala baraka an'i Sultan Iskandar ibni Almarhum Sultan Ismail, Sultan ao Johor. Araka ireo tati-baovao, ny Minisitry ny Atitany, Hishammuddin Tun Hussein, dia nilaza fa tsy ho afa-maina fotsiny amin'izao ilay mpitoraka blaogy.
Toy izao no itateran'ny fampahalalam-baovao ny tenin'ny Minisitry ny Atitany Maleziana:
Aoka ho anatra ho an'ny hafa ny mahazo azy, dia ireo izay mihevitra fa afaka miteny malalaka izay tiany ho lazaina ka tsy misaina ny ho fiantraikany… Nosamborina izy ary miandry ny Kabinetran'ny mpampanoa lalàna ny fanapahan-kevitra momba izay fepetra sahaza horaisina momba azy…Na dia hifona amin'ny Sultan sy ny vahoaka aza izy noho ilay fanalam-baraka, ny ministeran'ny Kolontsaina sy ny Komisiôna Maleziana misahana ny Fifandraisana sy ny Multimedia dia mbola afaka manenjika azy.
Notaterina fa nitolo-batana tany amin'ny mpitandro filaminana ilay mpitoraka blaogy, araka ireo tatitra tamin'ny 25 janoary 2010. Taorian'ny fahalasànana tampoky ny Sultan, Khairul Nizam dia nampangaina ho namoaka lahatsoratra manala baraka tao amin'ny blaoginy, izay antony nanaovan'ny mpitandro filaminana tatitra miisa 25 momba azy. Noho io antony io, ny mpitandro filaminana ao Johore dia nametraka mihitsy “andiany manokana [ special task force]” hanadihady ny amin'ity olana ity.
Hatreo, dia niala tsiny ampahibemaso sy nanàla ilay lahatsoratra i Khairul Nizam.
Ho fanampin'izay fanadihadian'ny Ministeran'ny Atitany sy ny mpitandro filaminana, ny Komisiôna Maleziana misahana ny Fifandraisana sy ny Multimedia [the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC)], sampana iray manara-maso ny aterineto, dia mbola hanao fanadihadiana ihany koa momba ity olana ity, hoy ny Ministry ny Kolontsaina, ny Serasera ary ny Fampahalalam-baovao , Rais Yatim.
Nolazaina fa niteny toy izao ny ministera:
Ny olona ilaintsika dia ireo mahay mankasitraka miohatra amin'ireo mandray anjara. Tsy dia fahita mihitsy izany teratany aziatika manala baraka mpitondra fanjakana teo aloha izany, indrindra indrindra fa tamin'ity dia ny Sultan farany tao Johor izay Yang di-Pertuan Agong.*
Araka raky ny fivoaran'ny raharaha, no tsy itovian'ny fijerin'ireo ministera roa ihany koa ny amin'ny fomba fitantanana ilay olana.. Taorian'ny sahotaka voalohany, Rais Yatim, Ministry ny Kolontsaina, ny Serasera ary ny Fampahalalam-baovao dia voalaza ho niteny